AJA I / O ဟာ့ဒ်ဝဲ Brainstorm ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ Real-time ဂရပ်ဖစ်နှင့် Virtual Set Solutions များကူညီပေးသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » AJA I / O Hardware သည် Brainstorm ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ Real-Time ဂရပ်ဖစ်နှင့် Virtual Set Solutions များကိုကူညီပေးသည်
AJA I / O Hardware သည် Brainstorm ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ Real-Time ဂရပ်ဖစ်နှင့် Virtual Set Solutions များကိုကူညီပေးသည်
စပိန်ထုတ်လွှင့်အထူးကုကုမ္ပဏီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူခေတ်မီဆန်းပြားကို real-time 3D ဂရပ်ဖစ်များနှင့်ထုတ်လွှင့်များတွင်အသုံးပြုသောကို virtual set ကိုဖြေရှင်းနည်းများ, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း proAV ပတ်ဝန်းကျင်မှာအတွက်လူသိများသည်။ မကြာသေးမီကယင်း၏ 25 ကျင်းပသည့်ကုမ္ပဏီ,th ယင်း၏မက်ဒရစ်နှင့်ဗလင်စီယာဌာနချုပ်အဖြစ်အမေရိကန်, မက္ကစီကို, စင်ကာပူနှင့်ဘေဂျင်းတွင်ရုံးခန်းများအနေဖြင့်စီးပွားရေး, ဝန်ဆောင်မှုများကို client များအတွက်တစ်နှစ်။ ယနေ့အထိ၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း RTVE, CNBC ဖြစ်သော CBS, NHK နှင့် RAI တူသောအဓိကထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် run ထက်ပို 2,500 အဆောက်အဦထဲမှာ installed ခံပြီ ဒေသဆိုင်ရာဘူတာ; နဲ့ဖျော်ဖြေရေး, အားကစားနှင့်ဒရာမာဇာတ်ကားအတွက်အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေး။ ၎င်း၏ client များပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအသံနှင့်ဗီဒီယို I / O လိုအပ်တဲ့အခါ, ကုမ္ပဏီဂီယာ Aja ဂီယာပေါ်တွင်မူတည်သည်။
တစ်ဦးချင်းစီကို client များအတွက်, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူအလွန်အမင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောစက်မှုလုပ်ငန်းစံ Hardware နဲ့ကို virtual အစုံနှင့်လုပ်ခဲ့ပြီးလက်တွေ့ဘဝမှ real-time 3D ဂရပ်ဖစ်အနေဖြင့်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်ကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ Estudio ထံမှ InfinitySet သို့မဟုတ် Aston မှကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လိုအပ်သော software ကိုဖြေရှင်းနည်းများ, ပါဝင်သော turnkey စနစ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်ကို real-time 3D ဂရပ်ဖစ်ကို virtual အစုံနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်အတွက်လုပ်ခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်ဂရပ်ဖစ်ပြင်ပထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်ထုတ်လုပ်မှုအပါအဝင် applications များ, တစ်အကွာအဝေးများအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ယင်း၏ထုတ်ကုန်အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမကယ်မလွှတ်သေချာစေရန်, ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏စနစ်များသို့ Aja ဗီဒီယိုကိုအသံနှင့်ဗီဒီယိုတစ်ခုအကွာအဝေး I / O ကတ်များပေါင်းစပ်ပြီး - ထို Aja KONA4ထံမှ Aja Corvid 88 ငှါ, လုပ်ငန်းအသွားအလာလိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်. ။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကဗီဒီယိုကို formats နှင့်စီမံကိန်း configurations အကြားအကူးအပြောင်းနိုင်ပါလိမ့်ချင် - ကွဲပြားခြားနားသောရှိမရှိ HD အရသာ, 4K စစ်ဆင်ရေးသို့မဟုတ် Multi-ကင်မရာ Setup ။ client များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ turnkey ဖြေရှင်းချက်သို့အဆောက်အအုံ Aja ရဲ့အသံနှင့်ဗီဒီယို I / O ဟာ့ဒ်ဝဲလွယ်ကူကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, "နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူကုန်ပစ္စည်း Manager ကို Thierry ဂွန်ဇာ shared ။ " အဲဒီ Aja ဂီယာလည်းနေပါစေမည်မျှနာရီလယ်ပြင်၌ကျရှုံးမည်မဟုတ်သူတို့ကိုပေးရစေသည် အသုံးပြုထားပြီး; ဒါဟာခိုင်မာတဲ့င်နှင့်ကိုက်ညီသောစွမ်းဆောင်ရည်တွင် track record ရှိပါတယ်, ပင်အများဆုံးတောင်းဆိုမှုများ enviroments မှာ။ "
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူလည်း Aja ရဲ့ tools တွေကို client ကိုပမာဏမှအထောက်အကူပြုများ၏အနာဂတ်-အထောက်အထားသဘောသဘာဝကိုတွေ့။ ဂွန်ဇာ "Aja နည်းပညာသည်လက်ရှိနှင့်လာမည့်နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်းများပံ့ပိုးပေးရန်အင်ဂျင်နီယာ, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်များသို့တည်ဆောက်ခြင်းသူတို့ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။ " ဟုပြောသည်
Estudio အပြင်, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူသည့် InfinitySet ကို virtual အစုံနှင့်လုပ်ခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်ဖြေရှင်းချက်အပါအဝင်ယင်း၏စနစ်များကိုပါဝါသောအခြားဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအိမ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုး; Aston ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းချက်; နှင့်အာရုံခံသတင်းဂရပ်ဖစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်ပေါင်း AstonElections သို့မဟုတ် OnMedia ကဲ့သို့အခြား template ကို-based ဖြေရှင်းနည်းများ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကခရီးစဉ်: www.brainstorm3d.com/
1993 ကတည်းက Aja ဗီဒီယိုအရည်အသွေးမြင့်ဆောင်ခဲ့, ဗီဒီယို interface ကိုနည်းပညာများ, converters အဖြစ်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာများတစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူခဲ့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် postproduction စျေးကွက်မှထိရောက်သောထုတ်ကုန်ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ Aja ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မြက်ချိုင့်, ကယ်လီဖိုးနီးယား၌အကြှနျုပျတို့၏အဆောက်အဦမှာအများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့်စနစ်များပေါင်းစည်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်ရောင်းအားရုပ်သံလိုင်းမှတစ်ဆင့်ရောင်းချကြသည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်အဘို့, ငါတို့၏ website မှာကြည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီး www.aja.com.
AJA သည် Ki Pro Ultra 12G ကိုကြေငြာခဲ့သည် - မေလ 28, 2020
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-08-15
ယခင်: ဒစ်ဂျစ်တယ် 8K HEVC Media Player ကိုသြဇာ Aja KONA5နှင့် Corvid 88 မြန်ဘို့လည်, Flexible I / O
နောက်တစ်ခု: တနင်္ဂနွေ Anchor / သတင်းထောက်